Mitokona Tsy Hihinan-kanina i Maryam Al Khawaja, Mpikatroka Zon’Olombelona Bahrainita Voarara Tsy Hiditra Ao Amin’ny Fireneny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2014 20:02 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, čeština , Dansk, বাংলা, English
Maryam Al-Khawaja, olom-pirenena Bahrainita sy Tale mpiara-mitantana ny Ivotoeran'ny Zon'Olombelona Eto Amin'ny Helodrano, no tsy navela niditra tao amin'ny fireneny tamin'ny [30 Aogositra 2014].
Araka ny filazan'ny fikambanana, nikasa hitsidika ny rainy, mpikatroka zon'Olombelona malaza Abdulhadi Al-Khawaja, izay any am-ponja sy miditra amin'ny andro faha-enina amin'ny fitokonany tsy hihinan-kanina i Maryam. Nogadraina ny rainy nandritra ny famoretana mahery vaika nataon'ny governemanta taorian'ireo fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia izay nanozongozona an'i Bahrain hatramin'ny 14 Febroary 2011. Voasazy higadra mandra-pahafatiny izy. Fitokonana tsy hihinan-kanina faharoa ataony izao. Naharitra 110 andro ny fitokonana tsy hihinan-kanina nataony voalohany ary nitsahatra rehefa nofahanan'ny manampahefana an-katerena.
Hoentina eo anatrehan'ny fitsarana ao #Bahrain aho rahampitso (31 Aogositra) noho ny fiampangana tsy fantatra. Tazomina ato amin'ny seranam-piaramanidina aho eo am-piandrasana izany
@martinlidegaard Manahy ny amin'i Maryam Al Khawaja mpikatroka ny zon'olombelona izay nitody tao #Bahrain tamin'ny alina, ary notànana avy hatrany sy hiatrika fitsarana rahampitso. #Denmark
Hanampy an'i @MARYAMALKHAWAJA izay voatàna ao amin'ny seranam-piaramanidina ao #Bahrain sy voalaza fa hoentina eo anatrehan'ny fisarahana rahampitso ve i #Denmark @martinlidegaard?
Tsy vao voalohany i Al-Khawaja no tsy navela hiditra ao Bahrain. Tamin'ny taon-dasa, nosakanan'ny mpiasan'ny zotra an'habakabaka tsy hiditra ao anaty fiaramanidina zotra Britanika ao Copenhague hisidina ho any Manama izy. Nanomboka tamin'ny fitroaram-bahoaka tamin'ny taona 2011 izay mitaky zo ara-tsivily sy politika bebe kokoa, nanao famoretana mahery vaika tamin'ireo mpanohitra politika ny governemanta. Anisan'izany ny fanarahamaso ireo zavatra atao antserasera, ny fanagadrana tsy amin'ny antony, ny fampijaliana sy fanesorana ny fizakana ny zom-pirenen'ireo Bahrainita.